Prof. Galaydh oo ku Eedeeyay Wasiirka Daakhiliga Inuu ka Soo Horjeedo Wadahadalka Madaxweyne Siilaanyo Kula Jiro Khaatumo | BuhodlePost.com
Prof. Galaydh oo ku Eedeeyay Wasiirka Daakhiliga Inuu ka Soo Horjeedo Wadahadalka Madaxweyne Siilaanyo Kula Jiro Khaatumo
“Faratoon wuxuu la soo taagan yahay Khaatumo ma jirto waar isagu yuu haystaa?”
Widh-widh(Dawan)- Hoggaamiyaha Maamulka Khaatumo ee wadahadalka kula jira Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland, Prof. Cali Khaliif Galaydh, ayaa sheegay in shirkii labada dhinac ku heshiiyeen in 10-ka July lagu qabto magaaladda Burco aanu dhinac qudhi dib u dhigi karin.
Cali Khaliif, wuxuu daadifeeyay xubno ka mid ah Guddida wadahadalka u matelaysa Somaliland oo Salaasadii sheegay in shirkii lagu waday in Burco lagu qabto dib loogu riixay 24-ka Bishan July, si loo dhammaystiro arrimo farsamo.
Mr. Galaydh oo shalay qaar ka kamid ah warbaahinta kula hadlay degmadda Widh-widh ee gobolka Buuhoodle, ayaa naqdiyay shirka dib loo dhigay, waxaannu yidhi; “Somaliland wadahadallo ayaa noo bilaabmay, meel fiicanna waaba la soo gaadhsiiyey, aanagu haddii aanu Khaatumo nahayna waxba dhulka nagama yaallaan, Somaaliland-na war ay noo soo diraysaa maaha mid ay TV-ga noo soo marinayso, meesha yaallaana waa arrin culus Salaasadii ayaa TV-ga war laga sii daayay, bal isaga haddaanu Khaatumo nahayna waanu ka shiraynaa,wax aanay ka muuqan dawladnimo iyo odaynimo, yaa meeshaa lagaga dhawaaqayey jawaab munaasib ahna waan siinaynaa.”
“Shirkayagu waxa uu ahaa 10 July inuu Burco ka qabsoomo, annaga oo laba dhinac ah (Somaliland iyo Khaatumo), ayaannu ku heshiinay iyagu (Somaliland) kama bixi karaan, dibna uma dhigi karaan, hadday ka baxaana wadahadalladii oo dhan ayay ka baxeen,”ayuu yidhi.
Cali Khaliif waxa uu si gaar ah u duray Wasiirka Daakhiliga, waxaannu yidhi; “Faratoon waanu ka xishoonay, shakhsi ahaan ayaanu uga xishoonay, Wasiirka Arrimaha Gudaha ee uu yahay, ayaanu uga xishoonay, wuxuu isagu la soo taagan yahay Khaatumo ma jirto iyo waa afar qof waar isagu yuu haystaa?, isaga madaaxweyne Siilaanyo ayaa magacaabay, Madaxweynuhu wadahadalkii uu danta bidayna wuu ka hor imaanayaa, anigu sidaas ma garanayo.”
18-kii Bishii June ee la soo dhaafay, ayay Xukuumadda Somaliland iyo maamulka Khaatumo kala saxeexdeen heshiis shan qoddob ka koobnaa oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro xiisadaha siyaasadeed iyo nabadgelyo ee kaa jiray qaar ka mid ah gobollada bariga Somaliland.